Fiiri LXDE | Laga soo bilaabo Linux
Courage | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Maanta waxaan ku eegi doonnaa deegaanka LXDE codsi aqriste Oscar.
LXDELmiisaan culus X11 Dsktop Environment) waa deegaan miisaankiisu fudud yahay oo adeegsada maktabadaha GTK + oo u adeegsada Openbox daaqad daaqade.
Qaarkood waxay ku andacoodaan inay ka fududdahay XFCE, oo aanan xaqiijin karin laakiin waxay sifiican ugu socotaa kumbuyuutar ay da'diisu leedhay iyo 512 Mb oo RAM ah sida tayda.
Aan aragno shaashadda:
Jaleecada hore waxaan ku arki karnaa inay tahay mid aad u fudud, dhexdeeda cunsurradu waa baarka, liiska, toobiyeyaasha, saacada, meeniska la xidhayo iyo sanduuq ay ku jirto garaafka cagaaran oo ah mitirka wax la cuno.
Markii aan rakibno, waxay u muuqataa mid aad u qaawan, sida haddii aan ku rakibeyno "ugu yaraan" ama "saldhig" desktop kasta oo kale
Liis menu ah oo na xusuusinaya nidaam cayiman, laakiin si buuxda u shaqeynaya.
LXDE waxay isticmaashaa aaladaha u gaarka ah Openbox.
Tani waa in la qaabeeyo muuqaalka daaqadaha, jiirka, astaamaha, noocyada, iwm.
Oo kan kale waxaan ku xulannaa gidaarka gidaarka
Sida aan ku arki karno YouTube-ka oo ku furan Firefox iyo tifaftiraha boostada blog ayaa lagu wadaa inuu inyar kayar kala bar
Iyada oo daalacayaasha kale ee fudud ayaa la yareeyey.
Haddii aadan haysan ikhtiyaar kale, rakibo laakiin waxaan doorbidaa KDE, LXDE waa mid aad u fudud oo aan qurux badnayn qurux ahaan laakiin waxaa lagula talinayaa kooxaha ilaha hooseeya
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Fiiri LXDE
Lxde waa mid aad ufiican oo si heer sare ah loogu taliyay kuwa daaqadaha ka tagay, waa wax aad u fudud oo laqeebsan karo.
Aad loo habeyn karaa? waaw ... in aan la xaqirin LXDE ka fog laakiin ... ma isku dayday KDE?
Runta aniga aniga ayaa qumman, inta udhaxeysa lxde iyo xfce waa kuwa ugu fiican; Hadda aan xisaabta ku darsanno in sida aan u arko «ka sii fudud ka fiican», iyo, kde ay aad u fiicnaan doonto laakiin waa shark leh wananka, mana jecli taas.
Haddii ay tahay mid aad loo qaabeyn karo. Waa inaad taabataa feylasha qaar, laakiin waa ..
Charles Salazar V. dijo
Ha dhayalsan, maxaa yeelay waa deegaan ujeeddooyin kaladuwan leh, lxde wuxuu diiradda saarayaa inuu noqdo mid fudud oo aan rar yareyn sida ugu macquulsan, taasi waa sababta rakibidda dhammaystiran ay u gaarto wax yar uun in ka badan 30 Mb, halka Kde ay diiradda saareyso bixinta khibrad desktop oo dhammaystiran. , qalab badan iyo wax walba, rakibaadda oo dhammaystiran waa sida 630 Mb, markaa si cad waxaad arki doontaa qalab badan oo GUI ah oo ku jira Kde si aad u qaabeysid nidaamka halka Lxde waxaad arki doontaa oo keliya kuwa aasaasiga ah iyo sida ay u isticmaasho OpenBox ahaan maareeyaha daaqadda, wax walba waad isku habeyn kartaa taabashada rc.xml iyo menu.xml feylasha oo ah waxa kaliya ee aad ubaahantahay.
Wali waxaan ahay taageere guud oo Kde ah, maalmo yar ka hor waxaan isticmaali jiray kaliya Openbox si aan u tijaabiyo waana jeclahay sidoo kale.
Ku jawaab Carlos Salazar V
Waxaan dhigay LXDE in yar ka hor, tan iyo markaas marwalba waan isticmaalaa. Waxaan soo maray Gnome2, Shell, KDE4, XFCE aakhirkiina waxaan kudhamaaday LXDE. Waxay ila tahay aniga muraayad aad u fudud, oo ii oggolaanaysa inaan shaqeeyo ama aan maaweelo naftayda dhibaato la'aan xasilloonida sababtoo ah isticmaalka wan (KDE, Shell), oo leh 1 GB oo Ram waxaan yara tagaa markaan bilaabayo inaan wax furo iyo LXDE waxaan ku guuleystay inaanan yeelan Isticmaal isweydaarsi yar (kde wuxuu liqay qiyaastii 200mb oo isku beddel ah saacaddii).
Waxaan u maleynayaa in LXDE ay tahay wax la beddeli karo (waxaan ku haystaa metacity), dhab ahaantii si aad ah ayaan wax uga beddelay, oo leh Docky iyo gkrellm waana ay ahayd, marka in la yiraahdo, qurux badan oo cunaysa qiyaastii 140MB oo Ram ah.
Waad ku mahadsan tahay saaxiib Courage gelitaanka, cad oo kooban, waxaan hayaa PC halyeey leh 512 Mb oo wan, halkaas ayaan ku rakibayaa oo ku tijaabinayaa, uma arko wax fool xun laakiin fudud.
Waxaan ku rakibay ubuntu oo leh lxde pentium 2 oo leh 383 wan waana ay fiicantahay.
384 wan, lol kalkuleytarkaygu wuu i fashilmay.
LXDE waa mid aad u wanaagsan. Muddo dheer ayaan u isticmaali jiray, maxaa yeelay waxay ku habboon tahay buuggeyga netka sababo la xiriira adeegsiga ilaha dhaqaale ee hooseeya, weligoodna igama niyad jabin, runtii, haddaanan aad u jeclaan KDE, weli waan isticmaali lahaa. LXDE iyo KDE, aniga ahaan, jawiga desktop ugu fiican.
Waxaan isku dayay tan iyo markii midnimadu soo baxday ee ubuntu netbook remix ee la soo dhaafay, iyo tan iyo markaas waxaan runtii jeclaa LXDE; waxa aan ugu jeclahay waa fudeydkiisa iyo inuu keydiyo kheyraadka (wan iyo batteri). Taasi waxay ii horseedday inaan ka beddelo Ubuntu caadiga ahayd Midnimo una beddelo Lubuntu.
Salaan, Geesi. Waan ka helay qoraalkaaga. Waxaan rajeynaynaa inaad waxbadan sooqoran doontid mustaqbalka. Mahadsanid.
Dabcan waan sameeyaa, aan aragno haddii aanan iga dhammaan fikradaha
Ma ogtahay waxa khiyaanadu tahay si fikradaha aysan u dhamaan? … Fudud, akhri maqaallada iyo wararka shabakadda, waxaad ka akhridaa X maqaal wax ku saabsan waxaadna tiraahdaa: «nacalad, taasi waa xiiso, laakiin haddii aan sidan si ka duwan u sameeyo way fiicnaan lahayd» ... iyo voila, halkaas waxaad ku haysataa fikrad cusub oo ku saabsan maqaal
Ama hadaan caajis ahay, ama haddii wax igu dhacaan (Waan ogahay inaad ka fikirayso emos), ef ni, waa duruufo badan
Dhawaan waxaan go aansaday inaan ku tijaabiyo waxoogaa ka badan sidii caadiga ahayd kombuyuutarradii hore ee aan ka shaqeynayay waxaanan ku dhejiyay Debian 6.0 iyaga oo leh LXDE sida desktop laakiin waxbaa igu dhacaya aniga oo aan waligey igu dhicin Gnome ama KDE midkood:
Markii aan soo galo, nidaamka caadiga ahi wuxuu galiyaa dhammaan faylalka galka shaqsiyeed ee shaashadda, taasi waa ... haddii aan haysto, tusaale ahaan, 2 fayl oo gurigayga / gurigayga ah, mid la yiraahdo Soo-dejin iyo mid kale oo loo yaqaan My_things, markaan galo ayaan helayaa desktop kuwa 2 fayl. Su'aashaydu waxay tahay… taasi ma inay tahay inay sidan ku ahaato LXDE mise waa cilladdayda qaabaynta?
Waxaan u maleynayaa inay tahay inay wax ku jiraan goobaha. Ma ku abuurtay fayl loo yaqaan Desktop ama Desktop gurigaaga?
Waa inay noqotaa taas maxaa yeelay aniga igama dhacdo aniga
Aad ayaan u jeclahay
Sida loo habeeyo Midnimada Ubuntu
LibreOffice 3.4.4 ayaa laga heli karaa Tijaabada Debian waana ay duulaysaa